International Hotel Mashaariicda - Project Hotel Armati Case Study1 - Sunrise Kempinski Hotel Beijing
Project Hotel Armati Case Study1 - Sunrise Kempinski Hotel Beijing
Mid ka mid ah Armati 5 bilaabaan mashruuca hotel ee Beijing, Shiinaha, soo dhaweynayaa in ay booqo hotel this si ay u arkaan our qasabada.
catalouge qasabada Armati fadlan hubi soo socda:
Kempinski aad soo dhoweeyay in Yanqi Lake, marsada cusub oo isjacayl iyo qurux, la views weyn ee Yanshan Mountain iyo Great Mutianyu ee Wall, kaliya drive saac ee mid ka Centre City Beijing. Sunrise Kempinski bixisaa guests iyo qoysaskooda waaya-aragnimo xiiso at a si buuxda u-dhafan dalxiis oo cusub oo ku taal duleedka Beijing. Xarumaha waxaa ka mid ah guestrooms 306 iyo shidmaan, goobaha la kulmo, Kempsinki The Spa, hiilaadka madadaalada iyo taam ahaanshihiisa, Club Kid ah iyo diyaariyeen ah ee qurbaanno Kuliyadda at sagaal makhaayadaha iyo qataarradeedii.
Naqshada waxaa ka dhise Shanghai Huadu Design Co., Sunrise Kempinski Hotel, Beijing iskuna qaab reer Qorraxda oo soo Muuqata iyo astaan ​​wada noolaanshaha, midnimada iyo xad. Laga soo bilaabo view kooxda xagal, dhismaha hotel waxaa qaabeeya sida scallop ah oo ka wakiil 'Fortune ee dhaqanka Chinese. Aragtida hore waa in ka mid ah 'kacaya Sun' - calaamad fast- koraya dhaqaalaha ee Shiinaha.
Mashruuca bilow musqusha hotel fiver raaxo Kempinski